musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Moderna CEO: COVID-19 denda rinopera pakati-2022
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Kodzero Dzevanhu • Interviews • Investments • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • Technology • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Chief Executive Officer weModerna, Inc., Stephane Bancel
Kana iwe ukatarisa kune indasitiri-yakawedzera kuwedzera kweanogadzira masimba mukati memwedzi mitanhatu yadarika, madosi akakwana anofanirwa kuwanikwa pakati pegore rinouya kuitira kuti munhu wese paPasi pano akwanise kubaiwa jekiseni.
Sekureva kwaStephane Bancel, mamiriro neCOVID-19 anozopedzisira ave akafanana neaya ane dzihwa.
Mushonga waModerna COVID-19 unobvumidzwa munyika dzinosvika zana, uchiri mumwe wemishonga mitatu inoshandiswa mushandirapamwe wekudzivirira zvirwere muUS.
Kuchave nejabs inowanika kunyangwe yevacheche nekukurumidza uye booster doses kune avo vanovada.
Chief Executive Officer weModerna, Inc., kambani yekuAmerican yemishonga uye biotechnology iri muCambridge, Massachusetts, Stephane Bancel, akataura kuti mamiriro neCOVID-19 anozopedzisira ave akafanana neaya ane furuwenza, uye kuwedzera mukugadzirwa kwejekiseni kunogona kuona coronavirus denda rakazosvika kumagumo pakati pa2022.
"Kana iwe ukatarisa kuwanda kwemaindasitiri-kuwanda kweanogadzira masimba mukati memwedzi mitanhatu yapfuura, mishonga yakakwana inofanirwa kunge ichiwanikwa pakati pegore rinouya kuitira kuti munhu wese paPasi pano akwanise kubaiwa majekiseni," akadaro Bancel mubvunzurudzo.
Sekureva kweUS pharma giant CEO, pachave nemajabs anowanikwa kunyangwe evana vacheche nekukurumidza uye booster doses kune avo vanovada.
"Avo vasina kubayiwa majekiseni vachazvidzivirira pachavo nekuti musiyano weDelta unotapukira," akadaro mukuru mukuru.
Paakabvunzwa kuti vanhu vachakwanisa riini kubuda mudenda, iro rakatoona vanhu vanopfuura mamirioni 219 vakatapukirwa uye vanopfuura mamirioni 4.5 vakafa, uye vodzokera kuhupenyu hwese, Bancel akapindura achiti: "Kubva nhasi, mugore, ndinofunga."
DzazvinoMushonga weIDIVIDI-19-dose maviri-anotenderwa mune dzimwe nyika zana, uchiri mumwe wemishonga mitatu inoshandiswa mushandirapamwe wekudzivirira zvirwere muUS. Iyo jab ine huwandu hwakanyanya hwekubudirira kwe100% mwedzi mitanhatu mushure mekutungamira kwepfuti repiri, zvisinganyanye kudzikira kubva pa93% yakataurwa panguva yayo yechikamu-chetatu chemakiriniki ekuedzwa.
Zvisinei, Bancel akasimbirira kuti avo vakabaiwa "hapana mubvunzo" vachatoda zororo pane imwe nguva kuti vagare vakachengetedzwa kubva kuhutachiona. Vati vanotarisira kuti vanhu vadiki vatore pfuti yekuwedzera kamwe chete pamakore matatu uye nevanhu vakuru - kamwe pagore.
DzazvinoBooster ine hafu yedosi yezvinhu zvinoshanda zvichienzaniswa neiyo yekutanga jekiseni, iyo inopa kambani imwezve mukana wekuwedzera kugadzirwa, akadaro.
“Vhoriyamu yemushonga wekudzivirira chirwere ndiwo musimboti mukuru. "Nehafu yedhayeti, tingave nemadhayoni emabhiriyoni matatu aripo pasi rose kwegore rinouya panzvimbo pemabhiriyoni maviri chete," Dzazvino CEO akatsanangura.
Moderna aive mumwe wevatanhatu-vanogadzira majekiseni avo Amnesty International vakapomerwa mhosva yekukonzeresa "dambudziko rekodzero dzevanhu risingaenzaniswi" nekuramba kutora chikamu muzvirongwa zvekusimudzira hutachiona hwepasirese uye vachida kubatana nenyika dzakapfuma.
Sekureva kwemushumo weAmnesty International, kambani yeUS pamwe chete nezvinodiwa naPfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca naNovavax ndivo vaikonzera chokwadi chekuti kubva pamadhora 5.76 bhiriyoni anoshandiswa pasi rese, chete 0.3% yakaenda kune nyika dzinowana mari shoma. .
Nick Eckerling anoti:
Gunyana 3, 2021 pa 18: 27